DAAWO:- Aqalka Sare oo shaki ka muujiyay in qalaldaad lagu soo daro dastuurka Somalia ee dib u eegista lagu samaynayo.
April 17, 2019 Xafiiska Puntland Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 0
Golaha Aqalka sare BFS ayaa yeeshay kal-fadhiga 5aad kulankiisa 3aad, ajandahana waxa uu ahaa Dhagaysiga warbixinta guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka iyo Akhrinta 1aad ee hindise sharciyeedka xaqsiinta Siyaasiyiinta.
Kulanka ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xiggeenka 1aad golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya sen, Abshir Maxamed Axmed.
Sen. Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid Guddoomiyaha guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka BFS ayaa ka hadlay dhismaha guddiga iyo xubnaha uu ka kooban yahay, waxa uuna sheegay in guddiga uu ka kooban yahay 16 xubnood oo ka kala socda labada aqal baarlamaanka iyo xubno ka kala socda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlada federaalka Soomaaliya.
Guddoomiye ku-xiggeenka 1aad golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya sen. Abshir Maxamed Axmed ayaa sheegay in la guda galayo ajandaha labaad ee fadhiga ee ah Akhrinta 1aad ee hindise sharciyeedka Xaqsiinta Siyaasiyiinta, waxaana senatarada ka hor akhriyay sen. Mahdi Daahir Sheeq Nuur oo xubin ka ah guddiga xeer hoosaadka golaha aqalka sare.
Daawo:- Jabhadda Coll.Caare oo ku biirtay Dagaalka Sanaag + Ciidamadii ugu badnaa oo buux dhaafiyay Dhahar iyo dagaalkii maanta “Jeegaanta jab ayaa gaadhay”.
DAAWO VIDEO:DEG DEG:Cali Khalif oo Somaliland Xabsi Ugu Habjabtey Taarikhda Fashilkiisa
DAAWO:- Axmed Madoobe “Amaanka Doorashada wan ku filanahay laakin DFS ayaa iga daba shaqeynaysa”.
XOG+DHAGEYSO: Maxaad ka Ogtahay Ujeedka safarka madaxweyne Deni uu ku tagayo Shiinaha
DEG DEG+DAAWO: Puntland Oo Si Adag Uga Hadashay Dacwada Korneyl Tuke Beesha Isaaq Ku Soo Oogtay
Deg-deg:- Jawaabta Kenya ”Dhoola-tus aan horay loo arag oo caawa ka socda Hawada Muqdisho iyo madaafiic laga maqlayo meel kala duwan”.
Deg-deg:- Khasaaraha dagaalkii maanta ee Sanaag oo la ogaaday iyo Somaliland oo jabkii ugu badnaa gaadhay.
Daawo Sawirada:- Wasiirka waxbarashada Puntland sidee maanta loogu soo dhaweeyay Deegaanka Damalla-Xagarre kahor inta aanay soo weerarin Sland.
Deg-deg:- Dhaawacyadii ugu badnaa dagaalkii Sanaag oo hadda lagaadhsiiyay Magaalada Dhahar.
Degdeg:- Askari katirsan Boliska Puntland oo hadda lagu dilay Boosaaso.
Waa sidee Xaaladda gobolka Sanaag kadib dagaalkii maanta lagu qaaday wasiirka waxbarashada Puntland?.
Faahfaahino kasoo baxaya dagaalka ka qarxay gobolka Sanaag + Wasiirka waxbarashada Puntland oo xaaladiisu wanaagsan tahay.